ခန္ဓာကိုယ် အတွက် Vitamin-C လိုအပ်ချက်၊ အကျိုးပြုပုံနှင့် ရရှိနိုင်သော အစားအစာများ – YANGON STYLE
ခန္ဓာကိုယ် အတွက် Vitamin-C လိုအပ်ချက်၊ အကျိုးပြုပုံနှင့် ရရှိနိုင်သော အစားအစာများ
Covid-19 (Corona Virus) ကူးစက်ရောဂါဟာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပြီး ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကူးစက်ခံနေရပြီဆိုတာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၄ ရက်နေ့ က အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအဆုတ်ရောင်ကူးစက်ရောဂါ ကို အတတ်နိုင်ဆုံထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်နိုင်စေဖို့နည်းလမ်းတွေကိုလည်း အတိအကျထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်းခြင်းကလည်း သဘာဝကာကွယ်ဆေးဖြစ်တာမို့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်အောင် မိမိနှင့် မိသားစု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုဂရုစိုက် ရမည့်အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာနေစေဖို့ ဗီတာမင်-စီ ကလည်းမရှိ်မဖြစ်လိုအပ်လှပါတယ်။းဒါကြောင့်မို့ ဗီတာမင်စီအရေးပါပုံနဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေကိုလေ့လာမိသလောက် ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်-စီ ဆိုတာ Ascorbic acid ပဲဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် Immune system (ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်) အတွက် အဓိကျလှတဲ့ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်သူဖြစ်ပါတယ်။ အသီးအနှံ နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကတော့ ဗီတာမင်-စီ ရရှိဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝအရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ ခန္ဓာကိုယ်က ဗီတာမင်-စီ ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့် နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့ အာဟာရတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းစားသောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတစ်ယောက်အတွက် တစ်ရက်ကို ဗီတာမင်-စီ ၂ဝဝမီလီဂရမ်(Mg)က အကောင်းဆုံးပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက် တစ်ရက်ကို ၉၀ milligrams (mg) ၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် ၇၅ milligrams (mg) ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် ၈၅ milligrams (mg) နှင့် ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့ သူဖြစ်ပါက ၄င်းတို့ကို ၃၅ milligrams (mg) ထပ်ပေါင်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်-စီက ဘာကြောင့် ဒီလောက်အရေးပါနေရတာလဲဆိုရင်
Vitamin-C ဆိုတာ Antioxidant တစ်မျိုးပဲဖြစ်သလို ဖျားနာခြင်းမှနေ ကင်ဆာရောဂါမဖြစ်ပွားစေရန် ဟန့်တားနိုင်တဲ့အထိအရေးပါလှပါတယ်။ ဗီတာမင်-စီ က ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကော်လာဂျင် ပရိုတင်းဓါတ်ဆိုတာ အရိုး၊အဆစ်၊ အရေပြား၊ အစာခြေစနစ်လမ်းကြောင်း၊တစ်ရှုး စသည်တို့ အသစ်မွေးဖွား၊ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။. ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယား နှင့်ရောဂါကာကွယ်ခုခံအားစနစ်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းကနေပါဝင်ပါတယ်။ နှလုံကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပါသလို နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ အအေးမိတုတ်ကွေးရောဂါများမဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် အင်မတန်အရေးပါတဲ့ Vitamin-C ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်-စီ မလုံလောက် ချို့တဲ့ပါက ဘာတွေဖြစ်ပွားနိုင်သလဲဆိုရင် ကော်လာဂျင်လုံလောက်စွာမထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း နှင့်အတူ အဆစ်နာ၊ သွား နှင့် သွားဖုံးဆိုင်ရာရောဂါ များနှင့်အနာအကျတ်နှေးခြင်း၊ စိတ်ကျရောဂါတို့ကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်-စီ ရရှိစေရန် စားသုံးလို့ရမယ့် အစားအသောက်များစွာရှိတဲ့ အထဲမှာမှ မြန်မာပြည်မှာအလွယ်တကူရနိုင်ပြီး အဟာရတန်ဖိုးမြင့်မားတဲ့ သဘာဝဗီတာမင်-စီ အစားအသောက်တွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
14. ငရုပ်ပွ စသည်တို့မှနေ့စဉ်လိုအပ်ချက် ဗီတာမင်စီကို အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုအသီးအနှံ များကို ချက်ပြုတ်စားသောက်ခြင်းက ဗီတာမင်စီတန်ဖိုးကို လျော့ကျနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အစိမ်းအတိုင်း ရေစင်စင်ဆေးကာ စားသုံးခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက ပေါင်းခြင်း နှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် အသုံးပြုချက်ပြုတ်ခြင်းက အကောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုတိုင်း ကူးစက်ရောဂါကင်းဝေးပြီး အာဟာရပြည့်ဝ ကျန်းမာလှပကြပါစေ။
Reference; Medical News Today
#TT #VitaminC #ImmuneSystem #VitaminC_Foods